भोलीदेखि सूर्य धनु राशीमा जाँदै, थाहा पाउनुस् तपाइको राशीमा के प्रभाव पर्छ ? – Everest Dainik – News from Nepal
भोलीदेखि सूर्य धनु राशीमा जाँदै, थाहा पाउनुस् तपाइको राशीमा के प्रभाव पर्छ ?
सूर्यलाई नवग्रहहरुको राजाको उपाधि पनि दिइएको छ । यो आत्मा, बुवा र सरकारी सेवाको कारक पनि मानिन्छ । सिंह राशिीका स्वामित्व सूर्यलाई प्राप्त हुन्छ । यो मेश राशीमा उच्च र तुला राशीमा निम्न मान्छि ।
१६ डिसेम्बर २०१८ का दिन सूर्य बिहान ९ बजेर २० मिनेटमा धनु राशीमा प्रवेश गर्ने छ । यो २०१९ को १४ जनवरी, सोमबार राती ८ बजेसम्म यो राशीमा हुने छ ।
सूर्यलाई मान प्रतिष्ठा, प्रसिद्दी तथा पिताको कारक ग्रह मानिन्छ । यसले शासकीय अधिकारीहरुमाथि प्रभाव पनि पार्ने भनिन्छ । त्यसैले सुर्य एक राशीबाट अर्कोमा जाँदा बिभिन्न राशीको सफलता र सामाजिक सम्मानका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
कुन राशीमा कस्तो प्रभाव ?
मेषः मेश राशीका जातकहरुलाई यो निकै शुभ समय हुने छ । सूर्य तपाईको राशीबाट पंचमेश भएर नवौं भावबाट गोचर भ्रमण गर्ने छ । सूर्यको प्रभावबाट तपाईका सन्तान र पिताको मान सम्मानमा बृद्धि हुने छ । तपाईको कार्यमा पनि एउटा नयाँ पहिचान पाइने छ । भाग्य हरेक कार्यमा साथ दिनेछ र यसैबाट तपाईलाई सफलता पाइने छ । यो अवधिमा गरिएका कार्यको शुभ फल पाइने छ । जो तपाईका लागि लाभकारी रहनेछन ।
वृषः यो राशीमा सूर्यको गोचरीय भ्रमण अष्टम भावबाट हुने छ । यसले पारिवारिक विषयमा सावधानी राख्नुपर्ने देखिन्छ । परिश्रमको लाभ त अवश्य नै पाइन्छ तर गरेको परिश्रमबाट उत्साहित हुने किसिमको फल भने नपाइन सक्छ । धर्म कर्ममा आस्था कम हुने छ । विवादबाट जोगिनुहोला । स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहोला ।
मिथुनः सूर्य यो राशीबाट सप्तम भाव भएर गोचरीय भ्रमण गर्ने छन । त्यसैले अधिक परिश्रम गरेर मात्रै लाभ पाउने आशा राख्न सक्नुहुन्छ । दाम्पत्य जीवनमा मेलजोलसँगै केही विवादको सम्भावना पनि हुन सक्छ । कार्यक्षेत्रमा विवाद र तनावको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । दैनिक व्यवसायमा सतर्कता राख्नुपर्ला । स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुस ।
कर्कटः तपाईको राशीबाट सूर्यको गोचरीय भ्रमण षष्ट (छैठौं) भावबाट हुने भएकोले आफ्नो वाणी अर्थात बोलीमा संयम राख्नुहोला । स्वास्थ्यका विषयमा सतर्क हुँदा वेश । भाग्यमा केही व्यवधान र ढिलाई हुने हुनसक्छ । तर परिश्रमको लाभ भने पाउनु नै हुने छ । नौकरी र व्यवसायसँग जोडिएका कार्यमा सहयोग पाइने छ । शत्रुवर्ग भने प्रभावहीन हुने छन ।
सिंहः सूर्यको भ्रमण पञ्चम भावमा छ । त्यसैले सन्तान पक्षबाट प्रसन्नता हुने छ । जीवनसाथी या प्रेम सम्बन्धमा अनुकूल स्थिति पाउनुहुने छ । मानसिक सुख शान्ति मिल्ने छ । महत्वपूर्ण काममा अनुकुल सफलता पाइनेछ । तर स्वास्थ्यप्रति सजगता अपनाउनु जरुरी छ । वाद विवादमा विजयी हुने योग छ ।
कन्याः सूर्य तपाईको राशीबाट चौथो भावमा भ्रमण गर्ने भएकोले पारिवारिक जीवनमा परेशानी आउन सक्छ । जीवनसाथीसँग मनमुटाव हुनुबाट जोगिनु पर्नेछ । नौकरी, व्यापार, व्यवसायमा सफलताका सार्थ उन्नतीको पनि योग छ । जनतासँग सम्बन्धित कार्य बन्नेछन । राजनीतिज्ञ भने अलि होशियारीपूर्वक हिँडनुपर्ने देखिन्छ ।
तुलाः यो राशीबाट तेश्रो भावमा सूर्य गोचर भ्रमण गर्ने भएकोले पराक्रमद्वारा तपाईलाई आर्थिक लाभको योग बन्ने छ । सामाजिक जीवन तथा कार्यक्षेत्रमा तपाई अनुकुलको सफलता पाइने छ । मानसम्मान बढने तथा भाग्यले पनि साथ दिने छ। पराक्रममा बृद्धि हुनुका साथै इष्टमित्रको पनि सहयोग पाइने छ ।
वृश्चिकः तपाईको राशीबाट सूर्यको गोचरीय भ्रमण द्वितीय भावमा भएकोले वाक चातुर्यताको लाभ पाइने छ । आर्थिक लाभको योपनि बन्न सक्छ । बुवाको सहयोगका साथै लाभको पनि यो बन्ने छ । स्वास्थ्यका दृष्टिले उत्तम समय छ । कुटुम्बहरुको सहयोग पनि मिल्नेछ । शत्रु पराजित हुने छन ।
धनुः सूर्य तपाईको राशीमा गोचर भ्रमण गर्दैछन । तपाईमो प्रभावमा बृद्धि हुने छ । महत्वाकांक्षा पुरा गर्न समर्थ हुने योग छ । भाग्यको साथ मिल्ने भएकोले मानसम्मान पनि बढने छ । व्यापार व्यवसायमा पनि उन्नती हुने छ । नौकरीपेशा मा अनुकूल अवस्था हुने छ । बुवा आमाको सहयोग पाइने छ ।
मकरः सूर्य तपाईको राशीबाट बाह्रौं स्थानबाट भ्रमण गर्ने भएकोले शत्रु प्रभावहीन हुने छन । यात्राको योग छ तर सावधानी राख्नु जरुरी । स्वास्थ्यका दृष्टिबाट राम्रो नराम्रो दुबै छ । बाहन चलाउँदा होस पुर्याउनु पर्ला । सकेसम्म यो अवधिमा ऋण नलिएकै राम्रो हुने छ
कुम्भः यो राशीदेखि सूर्यको गोचर भ्रमण एकादश भावमा हुने भएकोले जीवनसाथीबाट सहयोग पाइने छ । दैनिक व्यापार व्यवसायमा प्रगति हुने छ । स्त्री पक्षको सहयोग सराहनीय रहने छ । आर्थिक स्थिति मजबूत हुने र धनलाभ पाइने छ । उच्च अधिकारीहरुसँग सम्बन्ध राम्रो हुने छ र यसबाट लाभको अवसर पनि पाइने छ । घर या परिवारमा कुनै मांगलिक कार्य हुन सक्छ ।
मीनः सूर्य तपाईको राशीबाट दशौं भावमा भ्रमण गर्ने भएकोले मिश्रित परिणाम दिने छ । व्यापार व्यवसायमा स्वप्रयत्नहरुबाट लाभको योग छ । नौकरीपेशामा पनि लाभ पाउन सक्षम हुनुहुने छ । प्रमोशन पनि हुन सक्छ । तर स्वास्थ्यको दृष्टिले सावधानी राख्नु जरुरी छ ।
ट्याग्स: rashi, राशीफल